तपाईं पनि यी चीजहरू गर्नुहुन्छ, सावधान रहनुहोस्! - Info Nepal
INFONPLस्वास्थ्य र जीवनशैलीतपाईं पनि यी चीजहरू गर्नुहुन्छ, सावधान रहनुहोस्!
तपाईं पनि यी चीजहरू गर्नुहुन्छ, सावधान रहनुहोस्!
उत्तम स्वास्थ्य सल्लाहहरू: यी गल्तीहरूको साथ, बुढ्यौली तपाईंको युवावस्थामा आउँछ, तपाईं पनि यी चीजहरू गर्नुहुन्छ, सावधान रहनुहोस्! उत्तम स्वास्थ्य सल्लाहहरू: उमेर, थकान, कपाल सेतोको साथ शरीरमा कमजोरी (खरानी कपाल), छालामा झुर्रीहरू हुनु सामान्य कुरा हो, तर होशियार हुनुहोस् यदि तपाई आफ्नो युवावस्थामा आफैंलाई बुढो पार्दै हुनुहुन्छ भने।
उत्तम स्वास्थ्य सल्लाहहरू: तपाईले छाला र स्वास्थ्यमा परिवर्तन देख्नु भएको छ? उमेर ढल्केपछि शरीरमा कमजोरी, थकान, खैरो कपाल, छालामा झिम्का सामान्य हुन सक्छ तर यदि तपाई वृद्ध हुनुहुन्छ भने आफैले साइन इन गर्नुहोस्। वृद्धावस्थाको), त्यस पछि सावधान हुनुहोस्।
यदि तपाईं चाँडै बिरामी हुनुभयो वा स्टामिना कम हुँदै गइरहेको छ भने, त्यसोभए तपाईंसँग केही गल्तीहरू हुनसक्दछ, जसले तपाईंलाई प्रारम्भिक उमेरमा वृद्ध बनाउँछ। बुढेसकाल जीवनको तीतो सत्य हो। समयको साथ, प्रत्येक व्यक्ति बुढो हुन थाल्छ, तर केहि गल्तीहरू (गल्तीहरू) को कारण, बुढेसकालका लक्षणहरू समय अगाडि देखा पर्न थालेका छन्।
तपाईं पनि यसमा हुन सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबैभन्दा ठूलो कारण तपाईंको दिनचर्या हुन सक्छ। अनियमित दिनचर्या र गलत खानाहरू विशेष गरी यी सबैको लागि जिम्मेवार छन्! यहाँ के गल्तीहरू छन् जुन तपाईंलाई समयपूर्व बुढोको शिकार बनाउँदैछ जान्नुहोस्।
यी गल्तीहरूले तपाईंलाई युवावस्थामा बूढा बनाउँछ
१. राम्रोसँग निदाएको छैन
तपाईं धेरै उमेरमा नै वृद्धावस्थाको लक्षणहरू निद्रा नलिई वा कम निन्द्रामा पाउन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, कार्यक्षमता र तनावका कारण केही व्यक्तिहरू राम्ररी सुत्न असमर्थ छन्। सावधान हुनुहोस् यदि तपाईं hours घण्टा भन्दा कम सोनुहुन्छ भने। यो शरीरमा थकान र कमजोरीको कारण पनि हुन सक्छ।
२. अधिक चिनी उपभोग गर्दै
अधिक चिनी तपाईको स्वास्थ्यलाई मात्र हानिकारक हुन सक्छ तर खतरनाक हुन सक्छ। यदि तपाई धेरै चिनी उपभोग गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ। धेरै चिनी सेवन गर्दा छालामा झुर्रीहरू हुन सक्छ र रगतमा चिनीको मात्रा पनि अनियन्त्रित हुन सक्छ। यसले तपाईंलाई मधुमेहको शिकार बनाउँदछ र तपाईंको जवानीमा वा पहिले तपाईंको उमेर देख्न थाल्छ।
3. व्यायाम नगर्नुहोस्
यदि तपाईं शारीरिक रूपमा सक्रिय हुनुहुन्न भने, तपाईं समय भन्दा पहिले पुरानो देख्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईं केवल क्यालोरी भण्डारण गर्दै हुनुहुन्छ, क्यालोरीहरू बर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। व्यायाम गर्नाले तपाईले रोगहरू मात्र लिन सक्नुहुन्न तर तपाई मोटोपना पनि हुन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छैन।
4. डाइटको ख्याल नगर्नुहोस्
यदि तपाईं खाने र पिउने कुराको ख्याल राख्नुहुन्न भने, त्यसो भए तपाईं रोगहरूको पकडमा आउनुहुनेछ, र वृद्धावस्था पनि देखा पर्न सक्छ। यदि तपाइँ एक डाईटलाई ठीकसँग पछ्याउँनुहुन्न र तपाइँको जीवनशैली अनियमित छ भने, यस गल्ती तपाइँले ओडेल सक्नुहुन्छ।
जानिराख्नु हाेस् साङ्ला मा-र्ने यी घरेलु उपायहरु !